September 2, 2021 – Shwe Myanmar
“၂၀၂၁ခုနှဈ(စတငျဘာလ) အင်ျဂါသားသမီးမြားအတှကျ တဈလစာ အထူးဟောစာတမျး”
အမျိုးသမီးရောဂါအထူးဂရုစ်ိုက်ရမည်ပညာရေးတွင် လူမှုရေးအချစ်ရေးကိစ္စများဖြစ်ပေါ်ပါကပညာမှာ တစ်ပိုင်းတစ်စဖြစ်ပီးနှောင်နှေးလိမ့်မည်ဆုံးဖြတ်ချက်မှန်ကန်
အမြိုးသမီးရောဂါအထူးဂရုဈိုကျရမညျပညာရေးတှငျ လူမှုရေးအခဈြရေးကိစ်စမြားဖွဈပျေါပါကပညာမှာ တဈပိုငျးတဈစဖွဈပီးနှောငျနှေးလိမျ့မညျဆုံးဖွတျခကျြမှနျကနျ
မကျေနပ်တဲ့ အချိန်ုဆိုတာ လာတော့မယ်။
သင်္ခါရ နယ်ထဲမှာ …
ဘာမှ မြဲတာ မရှိပါဘူး။
ကိုယ့် ဘာသာ ဇွတ်လိမ်ညာပြီးတော့မှ …
သူများအိုပေမဲ့ … ငါမအိုသေးပါဘူး။
သူများနာပေမဲ့ငါ … မနာပါဘူး။
သူများသေပေမဲ့ … ငါ မသေနိုင်သေးပါဘူး။
သူများ ဒုက္ခ ရောက်ပေမဲ့ … ငါဒုက္ခမရောက်ပါဘူး။
သူများဆင်းရဲပေမဲ့ … ငါမဆင်းရဲပါဘူး။
သူများပညာမတတ်ပေမဲ့ … ငါပညာတတ်တယ်။
ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဇွတ်လိမ်ညာပြီးတော့မှ …
မသတ်နိုင်တော့ ဒီ အမှန်တရားကို မသိတာပါ။
အရသာ အာရုံတွေလဲ ဒီအတိုင်းပါပဲ ။
ကိုယ်ပေါ်မှာ ပူတဲ့ အပူအအေး အာရုံတွေလဲ ဒီအတိုင်းပါပဲ။
တွေးစရာ အာရုံတွေလဲ ဒီအတိုင်းပါပဲ။
ဒီအာရုံတွေ ငြိတွယ်နေရင် ငြိတွယ်နေသလောက်
အစားမက်ရင် … အစားနဲ့ဒုက္ခ ရောက်တယ်။
အလှမက်ရင် … အလှနဲ့ဒုက္ခရောက်မယ်။
ဘာလို့ဆိုတော့ … မြဲတာ မဟုတ်လို့။
အလှကြောင့် မာန်တက်ရင် …
ပညာကြောင့် မာန်တက်ရင် …
ငွေကြေးကြောင့် မာန်တက်ရင် …
ရာထူး အာဏာ ပါဝါတွေကြောင့် မာန်တက်ရင် …
ဒီရာထူး အာဏာ ပါဝါတွေကြောင့်ပဲ မာန်ကျရလိမ့်မယ်။
ကိုယ်အားကိုးတဲ့ လက်နက်နဲ့ပဲ …
ဒါတွေက အားကိုးရာ အစစ် မဟုတ်လို့။
ရာထူး အာဏာ ပါဝါတွေကို အားကိုးရင် …
ဒီရာထူး အာဏာ ပါဝါတွေကြောင့်ပဲ
ကိုယ်တက်တဲ့ ပညာကပဲ …
ကိုယ့်ရဲ့ ငွေကြေးကပဲ …
ကိုယ့်ရဲ့ ရာထူး အာဏာ ပါဝါတွေကပဲ …
သားမယားကို အားကိုးရင်လဲ …
ဆွေမျိုးတွေကို အားကိုးရင်လဲ …
အားကိုး ရာ အစစ်မဟုတ်လို့။
သူများကို စိတ်ဆင်းရဲအောင် လုပ်ရင် …
သူများကို မကျေနပ်အောင် လုပ်ရင် …
သူများကို ထိတ်လန့်အောင် လုပ်ရင် …
သူများကို ပျက်စီးစေချင်ရင် …
သူများကို ဒုက္ခရောက်စေချင်ရင် …
သူများရောက်တာ မရောက်တာတော့ …
ဘုရား ရဟန္တာ ကို ဒုက္ခပေးရင်တော့ …
ကိုယ်ဒုက္ခ ရောက်မှာကတော့ …
သူများကို မနာလိုရင် …
သူများကို ဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်ရင် …
အများကို ကျေနပ်အောင်လုပ်ရင် …
အများကို ပူစရာမရှိအောင်လုပ်ရင် …
အများကို ကောင်းစေချင်ရင် တဲ့စိတ်ရှိနေတော့
အများကောင်းတာ မကောင်းတာ အသာထား
လောလောဆယ်တော့ ကိုယ်တော့ ကောင်းနေပြီ ။
အဲ့ဒီစေတနာကြောင့် ကိုယ့်မှာ ပိုပိုပြီးတော့ ပြည့်စုံစေပါတယ်။
မကနြေပျတဲ့ အခြိနျုဆိုတာ လာတော့မယျ။
သင်ျခါရ နယျထဲမှာ …
ဘာမှ မွဲတာ မရှိပါဘူး။
ကိုယျ့ ဘာသာ ဇှတျလိမျညာပွီးတော့မှ …
သူမြားအိုပမေဲ့ … ငါမအိုသေးပါဘူး။
သူမြားနာပမေဲ့ငါ … မနာပါဘူး။
သူမြားသပေမေဲ့ … ငါ မသနေိုငျသေးပါဘူး။
သူမြား ဒုက်ခ ရောကျပမေဲ့ … ငါဒုက်ခမရောကျပါဘူး။
သူမြားဆငျးရဲပမေဲ့ … ငါမဆငျးရဲပါဘူး။
သူမြားပညာမတတျပမေဲ့ … ငါပညာတတျတယျ။
ကိုယျ့ကိုယျကို ဇှတျလိမျညာပွီးတော့မှ …
မသတျနိုငျတော့ ဒီ အမှနျတရားကို မသိတာပါ။
အရသာ အာရုံတှလေဲ ဒီအတိုငျးပါပဲ ။
ကိုယျပျေါမှာ ပူတဲ့ အပူအအေး အာရုံတှလေဲ ဒီအတိုငျးပါပဲ။
တှေးစရာ အာရုံတှလေဲ ဒီအတိုငျးပါပဲ။
ဒီအာရုံတှေ ငွိတှယျနရေငျ ငွိတှယျနသေလောကျ
အစားမကျရငျ … အစားနဲ့ဒုက်ခ ရောကျတယျ။
အလှမကျရငျ … အလှနဲ့ဒုက်ခရောကျမယျ။
ဘာလို့ဆိုတော့ … မွဲတာ မဟုတျလို့။
အလှကွောငျ့ မာနျတကျရငျ …
ပညာကွောငျ့ မာနျတကျရငျ …
ငှကွေေးကွောငျ့ မာနျတကျရငျ …
ရာထူး အာဏာ ပါဝါတှကွေောငျ့ မာနျတကျရငျ …
ဒီရာထူး အာဏာ ပါဝါတှကွေောငျ့ပဲ မာနျကရြလိမျ့မယျ။
ကိုယျအားကိုးတဲ့ လကျနကျနဲ့ပဲ …
ဒါတှကေ အားကိုးရာ အစဈ မဟုတျလို့။
ရာထူး အာဏာ ပါဝါတှကေို အားကိုးရငျ …
ဒီရာထူး အာဏာ ပါဝါတှကွေောငျ့ပဲ
ကိုယျတကျတဲ့ ပညာကပဲ …
ကိုယျ့ရဲ့ ငှကွေေးကပဲ …
ကိုယျ့ရဲ့ ရာထူး အာဏာ ပါဝါတှကေပဲ …
သားမယားကို အားကိုးရငျလဲ …
ဆှမြေိုးတှကေို အားကိုးရငျလဲ …
အားကိုး ရာ အစဈမဟုတျလို့။
သူမြားကို စိတျဆငျးရဲအောငျ လုပျရငျ …
သူမြားကို မကနြေပျအောငျ လုပျရငျ …
သူမြားကို ထိတျလနျ့အောငျ လုပျရငျ …
သူမြားကို ပကျြစီးစခေငျြရငျ …
သူမြားကို ဒုက်ခရောကျစခေငျြရငျ …
သူမြားရောကျတာ မရောကျတာတော့ …
ဘုရား ရဟန်တာ ကို ဒုက်ခပေးရငျတော့ …
ကိုယျဒုက်ခ ရောကျမှာကတော့ …
သူမြားကို မနာလိုရငျ …
သူမြားကို ဒုက်ခရောကျအောငျလုပျရငျ …
အမြားကို ကနြေပျအောငျလုပျရငျ …
အမြားကို ပူစရာမရှိအောငျလုပျရငျ …
အမြားကို ကောငျးစခေငျြရငျ တဲ့စိတျရှိနတေော့
အမြားကောငျးတာ မကောငျးတာ အသာထား
လောလောဆယျတော့ ကိုယျတော့ ကောငျးနပွေီ ။
အဲ့ဒီစတေနာကွောငျ့ ကိုယျ့မှာ ပိုပိုပွီးတော့ ပွညျ့စုံစပေါတယျ။
သူ့သားအသက် ၁၃ နှစ်အရွယ်မှာ သူဌေးကြီးဟာစိုးရိမ်လာတယ်။
သူဌေးကြီးဟာသူ့သားကို အလုပ်ရဲ့ တန်ဖိုးကိုသိစေချင်လို့ တစ်ခုခုလုပ်ဖို့အကြံထုတ်တယ်။
သူပြောသလိုကလေးပိုက်ဆံပါမလာရင် ထမင်းတကယ်မကျွေးဘူးဆိုတာကိုသိလို့ သူ့သားကိုငွေ ၂ ထောင်ကျပ် ထုတ်ပေးလိုက်တယ်။
သူကလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဆိုပြီးငွေ ၂ ထောင်ကျပ်ကိုပြလိုက်တယ်။
သူဌေးကြီးဟာသူ့သားပုံစံကိုကြည့်ပြီးအဲဒီပိုက်ဆံဟာ အလုပ်လုပ်လို့ရတာမဟုတ်ဘဲ သူများဆီကတောင်းလာတာမှန်းရိပ်မိတယ်။
ဒါပေမယ့်သူကပိုက်ဆံကို ဘာအလုပ်လုပ်လို့ရလာသလဲမမေးဘဲအဲဒီပိုက်ဆံကို ရေတွင်းထဲပစ်ချလိုက်လို့ပြောလိုက်တယ်။
ဒီတစ်ခါတော့ ကလေးအမေဟာတခြားမြို့မှာ နေမကောင်းဖြစ်နေတဲ့သူ့အဖေဆီသွားနေလို့အိမ်မှာမရှိဘူး။
အိမ်ကိုပိုက်ဆံပါမသွားရင်ညစာစားရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ အဒေါ်ကသနားပြီးငွေ ၂ထောင်ကျပ်ပေးလိုက်တယ်။
အဖိုးကြီးက ကလေးကို ဟိုတယ်ကိုလိုက်ခဲ့။ သူအလုပ်ပေးမယ်။
ဟိုတယ်ရောက်တော့အဖိုးကြီးက ကလေးကို ဟိုတယ်မီးဖိုချောင်မှာပုံနေတဲ့ ပန်းကန်တွေတစ်ထပ်ကြီးကို ဆေးခိုင်းတယ်။
ကလေးဟာ ၂ နာရီကြာအောင် ပင်ပင်ပန်းပန်းလုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာ အဖိုးကြီးကသူ့ကိုငွေ ၂ ထောင်ကျပ်ထုတ်ပေးလိုက်တယ်။
သူကလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဆိုပြီး ငွေ ၂ ထောင်ကျပ်ကိုပြလိုက်တယ်။
ချွေးနဲ့ ရင်းပြီး ရှာထားတဲ့ ပိုက်ဆံကို ဘယ်သူမှ မဖြုန်းရက်ဘူးကွ တဲ့။
သူ့သားအသကျ ၁၃ နှဈအရှယျမှာ သူဌေးကွီးဟာစိုးရိမျလာတယျ။
သူဌေးကွီးဟာသူ့သားကို အလုပျရဲ့ တနျဖိုးကိုသိစခေငျြလို့ တဈခုခုလုပျဖို့အကွံထုတျတယျ။
သူပွောသလိုကလေးပိုကျဆံပါမလာရငျ ထမငျးတကယျမကြှေးဘူးဆိုတာကိုသိလို့ သူ့သားကိုငှေ ၂ ထောငျကပျြ ထုတျပေးလိုကျတယျ။
သူကလုပျခဲ့ပါတယျဆိုပွီးငှေ ၂ ထောငျကပျြကိုပွလိုကျတယျ။
သူဌေးကွီးဟာသူ့သားပုံစံကိုကွညျ့ပွီးအဲဒီပိုကျဆံဟာ အလုပျလုပျလို့ရတာမဟုတျဘဲ သူမြားဆီကတောငျးလာတာမှနျးရိပျမိတယျ။
ဒါပမေယျ့သူကပိုကျဆံကို ဘာအလုပျလုပျလို့ရလာသလဲမမေးဘဲအဲဒီပိုကျဆံကို ရတှေငျးထဲပဈခလြိုကျလို့ပွောလိုကျတယျ။
ဒီတဈခါတော့ ကလေးအမဟောတခွားမွို့မှာ နမေကောငျးဖွဈနတေဲ့သူ့အဖဆေီသှားနလေို့အိမျမှာမရှိဘူး။
အိမျကိုပိုကျဆံပါမသှားရငျညစာစားရမှာမဟုတျဘူးဆိုလို့ အဒျေါကသနားပွီးငှေ ၂ထောငျကပျြပေးလိုကျတယျ။
အဖိုးကွီးက ကလေးကို ဟိုတယျကိုလိုကျခဲ့။ သူအလုပျပေးမယျ။
ဟိုတယျရောကျတော့အဖိုးကွီးက ကလေးကို ဟိုတယျမီးဖိုခြောငျမှာပုံနတေဲ့ ပနျးကနျတှတေဈထပျကွီးကို ဆေးခိုငျးတယျ။
ကလေးဟာ ၂ နာရီကွာအောငျ ပငျပငျပနျးပနျးလုပျပွီးတဲ့အခါမှာ အဖိုးကွီးကသူ့ကိုငှေ ၂ ထောငျကပျြထုတျပေးလိုကျတယျ။
သူကလုပျခဲ့ပါတယျဆိုပွီး ငှေ ၂ ထောငျကပျြကိုပွလိုကျတယျ။
ခြှေးနဲ့ ရငျးပွီး ရှာထားတဲ့ ပိုကျဆံကို ဘယျသူမှ မဖွုနျးရကျဘူးကှ တဲ့။
တစ်ခါတုန်းက တိုင်းပြည်တစ်ခုတွင် အလွန် ကြမ်းတမ်း ရက်စက်သော ဘုရင် တစ်ပါး ရှိရာ တိုင်းသူ ပြည်သားများနှင့်
မှူးကြီး မတ်ကြီးများက မနှစ်သက်ကြ သော်လည်း ကြောက်ရွံ့သောကြောင့် ပြန်လှန် ပြောဆိုရန် မရဲကြပေ။
ထိုအထဲတွင် စိတ်ထား မကောင်းသော အမတ်ကြီး တစ်ပါးလည်း ပါဝင်သည်။ တစ်နေ့သော် ဘုရင်ကြီးက တစ်တိုင်းပြည်လုံးကို အံ့ဩသွားစေ နိုင်မည့်
အမိန့် တစ်ခုကို ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။ ငါ၏ တိုင်းပြည် အဝှမ်းတွင် မည်သည့် ကြမ်းတမ်း ရက်စက်ခြင်း၊ တရား မမျှတခြင်း မရှိစေရ ဟူ၍ဖြစ်သည်။
ဤအမိန့် ထုတ်ပြီးကတည်းက ရှင်ဘုရင်ကြီး ကိုယ်တိုင်လည်း သူ၏ စကားအတိုင်း တိုင်းပြည်ကို မေတ္တာ အပြည့်အဝ ထားပြီး တော်တည့် မှန်ကန်စွာ
အုပ်ချုပ်သဖြင့် နဂိုက တင်ရှိခဲ့သည် နာမည်ဆိုးပင် ပျောက်ကွယ်သွားပြီး သူ့ကို အလွန် နူးညံ့ သိမ်မွေ့သော ရှင်ဘုရင်ကြီးဟု ပြောင်းလဲ ခေါ်ဝေါ်လာကြ အထိပင် ဖြစ်သည်။
လအနည်း ကြာသောအခါ ရှင်ဘုရင်ကြီးအား မလိုမုန်းထား ပိုဖြစ်လာပြီး ၊ ဩဇာညောင်းသော မင်းသား တပါးကို ထီးနန်း အပ်လိုသော အမတ်ကြီးက
အခြားသူများ မရှိသော အချိန်တွင် တိတ်တဆိတ် ရှေ့တော်သို့ လာရောက် ခစားသည်။
” အရှင်မင်ကြီး ၊ စိတ် အနှောက်အယှက် မဖြစ်ရင် တစ်ခု မေးချင်ပါတယ် ”
” မေးစေကွဲ့ ”
” အရှင်မင်းကြီး ယခုကဲ့သို့ အဘယ်ကြောင့် ချက်ချင်းကြီး ပြောင်းလဲသွားသလဲ ဆိုတာကို ကျတော်မျိုးကြီး သိချင်ပါတယ် ”
” ဒါက ဒီလိုပါ ”
” ငါ တနေ့တော့ အရပ်သား အသွင်နဲ့ မဲလိုက်တုံး ၊ ငါနဲ့ အတူ ပါလာတဲ့ အမဲလိုက်ခွေးက ယုန်လေး တကောင်ကို လိုက်ဆွဲတာ ယုန်ရဲ့ ခြေထောက်
တဖက်ကို ကိုက်မိတယ် ၊ ဒါပေမဲ့ ယုန်လေးက ကံကောင်းလို့ ကျောက်တုံး နှစ်ခုကြားထဲ ဝင်ပြီး လွတ်မြောက် သွားတယ်။
ငါတို့ ရွာထဲ ရောက်တော့ ခုနက အမဲလိုက်ခွေးက ရွာသား တစ်ယောက်ကို သဲသဲ မဲမဲ သွားဟောင်တော့ ကျောက်တုံးကြီးနဲ့ ပြစ်ပေါက်
ခံရတာ ခွေးရဲ့ခြေထောက် တော်တော် နာသွားပုံ ရတယ်၊ မထနိုင် တော့ဘူး ။ ” ” မကြာပါဘူး အဲဒီခွေးကို ခဲနဲ့ ပေါက်ခဲ့တဲ့ ရွာသားလည်း
ရှေ့ နည်းနည်းဘဲ လျောက်သွားရ သေးတယ်.. လမ်းဘေးမှာ ရှိတဲ့ မြင်းတကောင်က ကန်လိုက်တာ သူ့ရဲ့ ဒူးတဖက် ဒဏ်ရာ ရသွားလို့
မြေကြီးပေါ် ခွေကနဲ ထိုင်ကျ သွားတယ် ၊ မြင်းလည်း သူ ကန်လိုက်တာကြောင့် လူတွေ ရုတ်ရုတ် သဲသဲ ဖြစ်သွားတာကို လန့်ပြီး
ဟိုပြေး ဒီပြေး ပြေးရာက ခြေထောက် တဖက်ဟာ ချိုင့်ခွက့်တစ်ခုထဲ ကျသွားလို့ အနာတရ ဖြစ်ပြီး ပြန်မထနိုင် တော့ဘူး၊
အဲဒါတွေ အားလုံးဟာ မကောင်းမှု တစ်ခုကြောင့် ဆက်တိုက် ဖြစ်လာတဲ့ မကောင်းမှု သံသရာတွေ ပါဘဲ၊
ဒါကြောင့် ငါလည်း ပြောင်းလဲဘို့ ဆုံးဖြတ် လိုက်တာပါ ။ ” ရှင်ဘုရင်၏ စကားကို ကြားရသော အမတ်ကြီးမှာ လောဘဇော ဖုံးလွှမ်းနေ ၍ ကောင်းသော
စိတ်နှလုံးကို ရရှိရမည့် အစား ဤအချိန်တွင် ရှင်ဘုရင်ကြီး၏ စိတ်နှလုံး ပျော့ပြောင်းသည်ကို ငါသေချာစွာ သိရပေပြီ ။
ရှင်ဘုရင်နှင့် ငါ နှစ်ဦးတည်း ရှိနေသော ဤအချိန်ကို လုံးဝ လက်လွတ် မခံနိုင်၊ ထိုကြောင့် ယခုပင် ဘုရင်ကြီးကို လုပ်ကြံတော့မည်
ဟူသော စိတ်ယုတ်ဖြင့် တဟုန်ထိုး ရှေ့တိုးလာရာ လှေကားထစ်ကို မမြင်လိုက်၍ ခလုတ်တိုက် မှောက်လဲကျပြီး
မိမိ၏ လက်နက်ဖြင့် မိမိကို ပြန်ထိုးမိလေ တော့သည် ။
တဈခါတုနျးက တိုငျးပွညျတဈခုတှငျ အလှနျ ကွမျးတမျး ရကျစကျသော ဘုရငျ တဈပါး ရှိရာ တိုငျးသူ ပွညျသားမြားနှငျ့
မှူးကွီး မတျကွီးမြားက မနှဈသကျကွ သျောလညျး ကွောကျရှံ့သောကွောငျ့ ပွနျလှနျ ပွောဆိုရနျ မရဲကွပေ။
ထိုအထဲတှငျ စိတျထား မကောငျးသော အမတျကွီး တဈပါးလညျး ပါဝငျသညျ။ တဈနသေ့ျော ဘုရငျကွီးက တဈတိုငျးပွညျလုံးကို အံ့ဩသှားစေ နိုငျမညျ့
အမိနျ့ တဈခုကို ထုတျပွနျလိုကျသညျ။ ငါ၏ တိုငျးပွညျ အဝှမျးတှငျ မညျသညျ့ ကွမျးတမျး ရကျစကျခွငျး၊ တရား မမြှတခွငျး မရှိစရေ ဟူ၍ဖွဈသညျ။
ဤအမိနျ့ ထုတျပွီးကတညျးက ရှငျဘုရငျကွီး ကိုယျတိုငျလညျး သူ၏ စကားအတိုငျး တိုငျးပွညျကို မတ်ေတာ အပွညျ့အဝ ထားပွီး တျောတညျ့ မှနျကနျစှာ
အုပျခြုပျသဖွငျ့ နဂိုက တငျရှိခဲ့သညျ နာမညျဆိုးပငျ ပြောကျကှယျသှားပွီး သူ့ကို အလှနျ နူးညံ့ သိမျမှသေ့ော ရှငျဘုရငျကွီးဟု ပွောငျးလဲ ချေါဝျေါလာကွ အထိပငျ ဖွဈသညျ။
လအနညျး ကွာသောအခါ ရှငျဘုရငျကွီးအား မလိုမုနျးထား ပိုဖွဈလာပွီး ၊ ဩဇာညောငျးသော မငျးသား တပါးကို ထီးနနျး အပျလိုသော အမတျကွီးက
အခွားသူမြား မရှိသော အခြိနျတှငျ တိတျတဆိတျ ရှတေ့ျောသို့ လာရောကျ ခစားသညျ။
” အရှငျမငျကွီး ၊ စိတျ အနှောကျအယှကျ မဖွဈရငျ တဈခု မေးခငျြပါတယျ ”
” မေးစကှေဲ့ ”
” အရှငျမငျးကွီး ယခုကဲ့သို့ အဘယျကွောငျ့ ခကျြခငျြးကွီး ပွောငျးလဲသှားသလဲ ဆိုတာကို ကတြျောမြိုးကွီး သိခငျြပါတယျ ”
” ငါ တနတေ့ော့ အရပျသား အသှငျနဲ့ မဲလိုကျတုံး ၊ ငါနဲ့ အတူ ပါလာတဲ့ အမဲလိုကျခှေးက ယုနျလေး တကောငျကို လိုကျဆှဲတာ ယုနျရဲ့ ခွထေောကျ
တဖကျကို ကိုကျမိတယျ ၊ ဒါပမေဲ့ ယုနျလေးက ကံကောငျးလို့ ကြောကျတုံး နှဈခုကွားထဲ ဝငျပွီး လှတျမွောကျ သှားတယျ။
ငါတို့ ရှာထဲ ရောကျတော့ ခုနက အမဲလိုကျခှေးက ရှာသား တဈယောကျကို သဲသဲ မဲမဲ သှားဟောငျတော့ ကြောကျတုံးကွီးနဲ့ ပွဈပေါကျ
ခံရတာ ခှေးရဲ့ခွထေောကျ တျောတျော နာသှားပုံ ရတယျ၊ မထနိုငျ တော့ဘူး ။ ” ” မကွာပါဘူး အဲဒီခှေးကို ခဲနဲ့ ပေါကျခဲ့တဲ့ ရှာသားလညျး
ရှေ့ နညျးနညျးဘဲ လြောကျသှားရ သေးတယျ.. လမျးဘေးမှာ ရှိတဲ့ မွငျးတကောငျက ကနျလိုကျတာ သူ့ရဲ့ ဒူးတဖကျ ဒဏျရာ ရသှားလို့
မွကွေီးပျေါ ခှကေနဲ ထိုငျကြ သှားတယျ ၊ မွငျးလညျး သူ ကနျလိုကျတာကွောငျ့ လူတှေ ရုတျရုတျ သဲသဲ ဖွဈသှားတာကို လနျ့ပွီး
ဟိုပွေး ဒီပွေး ပွေးရာက ခွထေောကျ တဖကျဟာ ခြိုငျ့ခှကျ့တဈခုထဲ ကသြှားလို့ အနာတရ ဖွဈပွီး ပွနျမထနိုငျ တော့ဘူး၊
အဲဒါတှေ အားလုံးဟာ မကောငျးမှု တဈခုကွောငျ့ ဆကျတိုကျ ဖွဈလာတဲ့ မကောငျးမှု သံသရာတှေ ပါဘဲ၊
ဒါကွောငျ့ ငါလညျး ပွောငျးလဲဘို့ ဆုံးဖွတျ လိုကျတာပါ ။ ” ရှငျဘုရငျ၏ စကားကို ကွားရသော အမတျကွီးမှာ လောဘဇော ဖုံးလှမျးနေ ၍ ကောငျးသော
စိတျနှလုံးကို ရရှိရမညျ့ အစား ဤအခြိနျတှငျ ရှငျဘုရငျကွီး၏ စိတျနှလုံး ပြော့ပွောငျးသညျကို ငါသခြောစှာ သိရပပွေီ ။
ရှငျဘုရငျနှငျ့ ငါ နှဈဦးတညျး ရှိနသေော ဤအခြိနျကို လုံးဝ လကျလှတျ မခံနိုငျ၊ ထိုကွောငျ့ ယခုပငျ ဘုရငျကွီးကို လုပျကွံတော့မညျ
ဟူသော စိတျယုတျဖွငျ့ တဟုနျထိုး ရှတေို့းလာရာ လှကေားထဈကို မမွငျလိုကျ၍ ခလုတျတိုကျ မှောကျလဲကပြွီး
မိမိ၏ လကျနကျဖွငျ့ မိမိကို ပွနျထိုးမိလေ တော့သညျ ။
“သငျ့အိမျမှာ မီး ကှ ငျး ဂ မု နျး ပငျစိုကျထားပါသလား၊ မစိုကျရသေးရငျစိုကျထားပါ”
တိုင်းမှာလွယ်ကူစွာမြင်တွေ့နိုင်ပါသည်၁နှာခေါင်းသွေးလျှံအတွက် မီးကွင်းဂမုန်းနှာခေါင်းသွေးလျှံဖြစ်လာပါကမီးကွင်းဂမုန်းပင်ကို ရေစင်အောင်ဆေးကာထောင်း၍၄င်းအဖတ်ကို
တိုငျးမှာလှယျကူစှာမွငျတှနေို့ငျပါသညျ၁နှာခေါငျးသှေးလြှံအတှကျ မီးကှငျးဂမုနျးနှာခေါငျးသှေးလြှံဖွဈလာပါကမီးကှငျးဂမုနျးပငျကို ရစေငျအောငျဆေးကာထောငျး၍၄ငျးအဖတျကို
“နိုဝငျဘာလဖှားလေးတှရေဲ့ ပငျကိုယျအကငျြ့စရိုကျနဲ့ သူမတူတဲ့အားသာခကျြ (၁၀) မြိုး”
နိုဝင်ဘာလဖွားလေးတွေရဲ့ ပင်ကိုယ်အကျင့်စရိုက်နဲ့ သူမတူတဲ့အားသာချက် (၁၀) မျိုး
လူတွေဟာ မွေးတဲ့လအလိုက် ကိုယ့်ရဲ့မွေးရာပါ အားသာချက်နဲ့ အမူအကျင့်လေးတွေရှိပါတယ်။ ခုဖော်ပြပေးမှာကတော့ နိုဝင်ဘာလမှာမွေးဖွားတဲ့သူလေးတွေရဲ့ပင်ကိုယ်အကျင့်စရိုက်နဲ့ သူမတူတဲ့အားသာချက်လေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကြည့်လိုက်ပါဦးနော်။
(၁) နိုဝင်ဘာဖွားလေးတွေဟာ ပြိုင်စံရှားတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်အရာကိုပဲလုပ်လုပ် ကိုယ့်နည်းကိုယ့်ဟန်၊ ကိုယ်ပိုင်ဒီဇိုင်းနဲ့ လုပ်တတ်သူတွေဖြစ်ပြီး သူတို့ရဲ့အတွေးအခေါ်၊ ဖန်တီးနိုင်မှုစွမ်းရည်တွေကတော့ တကယ်ကိုအံ့မခန်းပါပဲ။
(၂) နိုင်ဝင်ဘာဖွားလေးတွေဟာ သစ္စာရှိတဲ့နေရာမှာတော့ နှစ်ယောက်မရှိတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒီရာသီဖွားလေးတွေနဲ့ ချစ်မိပြီဆိုရင် နှလုံးသားအကြွင်းမဲ့နဲ့ ယုံကြည်လို့ရပါတယ်။ သူတို့တွေဟာ လွယ်လွယ်နဲ့မချစ်တတ်သလို၊ ချစ်ပြီဆိုရင်လည်း တစ်သက်လုံးသစ္စာရှိတဲ့သူတွေပါ။
(၃) နိုဝင်ဘာဖွားလေးတွေဟာ များသောအားဖြင့် လှကြပါတယ်၊ အလှကြီးမဟုတ်ရင်တောင် အရမ်းဆွဲဆောင်မှုရှိတယ်ဆိုတာကတော့ ငြင်းလို့မရပါဘူး။ ရောက်လေရာနေရာတိုင်းမှာ လူအများရဲ့အာရုံစိုက်ခြင်းကို ခံရတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။
(၄) ဒီလဖွားလေးတွေဟာ အလုပ်အရမ်းကြိုးစားတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ တာဝန်သိတတ်ပြီး အမြဲတမ်းလည်း တာဝန်ကျေပွန်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ လုပ်ပြီဆိုရင်လည်း အကောင်းဆုံးလုပ်တတ်ကြလို့ အများရဲ့လေးစားချစ်ခင်မှုကို ရရှိကြပါတယ်။
(၅) နိုဝင်ဘာဖွားလေးတွေဟာ အနေအေးသလို သိုသိုသိပ်သိပ်နေတတ်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ အနေအထိုင်အရမ်းတတ်သလို၊ စိတ်နှလုံးလည်း အေးချမ်းတဲ့သူတွေပါ။ လွယ်လွယ်နဲ့ဒေါသမထွက်တတ်သလို တကယ်ဒေါသထွက်လာပြီဆိုရင်လည်း တစ်ဖက်က တော်တော်လွန်လို့ဆိုတာ သေချာပါတယ်။
(၆) နိုဝင်ဘာဖွားလေးတွေဟာ ကိုယ်ပိုင်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနဲ့ နေထိုင်တတ်သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ သူတစ်ပါးကို ပြိုင်ဆိုင်တာတွေ၊ မနာလိုတာတွေမရှိသလို၊ သူများလုပ်တိုင်းလည်း လိုက်မလုပ်တတ်ပါဘူး။ မလုပ်ချင်တာကို အတင်းခိုင်းလို့မရသလို၊ လုပ်ချင်ပြီဆိုရင်လည်း တားလို့မရတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။
(၇) နိုဝင်ဘာဖွားလေးတွေဟာ တစ်ယောက်တည်းနေတတ်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ အတွေးတွေ၊ သူတို့စိတ်ထဲမှာရှိတာတွေကိုလည်း ပြောတတ်တဲ့သူတွေမဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ယောက်တည်း သီးသီးသန့်သန့်နဲ့ လျှို့ဝှက်တတ်တဲ့သူလေးတွေဖြစ်ပါတယ်။
(၈) သူတစ်ပါးကို အရမ်းစာနာတတ်သလို သတ္တဝါလေးတွေကိုတောင် ကြင်နာပြီးမေတ္တာထားနိုင်တဲ့သူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်ကစပြီး သူတစ်ပါးကို နာကျင်အောင် ဘယ်တော့မှစလုပ်မယ့်သူတွေ မဟုတ်ပါဘူး။
(၉) နိုဝင်ဘာဖွားလေးတွေဟာ အရမ်းတရားမျှတတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ သူတစ်ပါးကို အနိုင်ကျင့်တာတွေ၊ မျက်နှာလိုက်တာတွေ မရှိသလို သူငယ်ချင်းတွေကိုပဲဖြစ်ဖြစ်၊ လက်အောက်ငယ်သားတွေကိုပဲဖြစ်ဖြစ် တန်းတူအခွင့်အရေးပေးပြီး မျှမျှတတ ချစ်ခင်တတ်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။
(၁၀) နိုင်ဝင်ဘာဖွားလေးတွေဟာ နည်းနည်းတော့ ဇီဇာကြောင်ပါတယ်။ သူတို့ဒါဆိုဒါ၊ ဘူးဆို ဖရုံမသီးတဲ့သူလေးတွေဖြစ်ပါတယ်။ သူတစ်ပါးရဲ့ထင်မြင် ယူဆချက်တွေကို အမြဲလေးစားတတ်တဲ့သူတွေ ဖြစ်တဲ့အလျောက် သူတို့အပေါ်မှာလည်း လေးစားသမှုရှိတာကို လိုချင်ပါတယ်။ Credit;THAR THAR LAY
နိုဝငျဘာလဖှားလေးတှရေဲ့ ပငျကိုယျအကငျြ့စရိုကျနဲ့ သူမတူတဲ့အားသာခကျြ (၁၀) မြိုး
လူတှဟော မှေးတဲ့လအလိုကျ ကိုယျ့ရဲ့မှေးရာပါ အားသာခကျြနဲ့ အမူအကငျြ့လေးတှရှေိပါတယျ။ ခုဖျောပွပေးမှာကတော့ နိုဝငျဘာလမှာမှေးဖှားတဲ့သူလေးတှရေဲ့ပငျကိုယျအကငျြ့စရိုကျနဲ့ သူမတူတဲ့အားသာခကျြလေးတှပေဲဖွဈပါတယျ။ ကွညျ့လိုကျပါဦးနျော။
(၁) နိုဝငျဘာဖှားလေးတှဟော ပွိုငျစံရှားတဲ့သူတှဖွေဈပါတယျ။ ဘယျအရာကိုပဲလုပျလုပျ ကိုယျ့နညျးကိုယျ့ဟနျ၊ ကိုယျပိုငျဒီဇိုငျးနဲ့ လုပျတတျသူတှဖွေဈပွီး သူတို့ရဲ့အတှေးအချေါ၊ ဖနျတီးနိုငျမှုစှမျးရညျတှကေတော့ တကယျကိုအံ့မခနျးပါပဲ။
(၂) နိုငျဝငျဘာဖှားလေးတှဟော သစ်စာရှိတဲ့နရောမှာတော့ နှဈယောကျမရှိတဲ့သူတှဖွေဈပါတယျ။ ဒီရာသီဖှားလေးတှနေဲ့ ခဈြမိပွီဆိုရငျ နှလုံးသားအကွှငျးမဲ့နဲ့ ယုံကွညျလို့ရပါတယျ။ သူတို့တှဟော လှယျလှယျနဲ့မခဈြတတျသလို၊ ခဈြပွီဆိုရငျလညျး တဈသကျလုံးသစ်စာရှိတဲ့သူတှပေါ။
(၃) နိုဝငျဘာဖှားလေးတှဟော မြားသောအားဖွငျ့ လှကွပါတယျ၊ အလှကွီးမဟုတျရငျတောငျ အရမျးဆှဲဆောငျမှုရှိတယျဆိုတာကတော့ ငွငျးလို့မရပါဘူး။ ရောကျလရောနရောတိုငျးမှာ လူအမြားရဲ့အာရုံစိုကျခွငျးကို ခံရတဲ့သူတှဖွေဈပါတယျ။
(၄) ဒီလဖှားလေးတှဟော အလုပျအရမျးကွိုးစားတဲ့သူတှဖွေဈပါတယျ။ တာဝနျသိတတျပွီး အမွဲတမျးလညျး တာဝနျကပြှေနျတဲ့သူတှဖွေဈပါတယျ။ လုပျပွီဆိုရငျလညျး အကောငျးဆုံးလုပျတတျကွလို့ အမြားရဲ့လေးစားခဈြခငျမှုကို ရရှိကွပါတယျ။
(၅) နိုဝငျဘာဖှားလေးတှဟော အနအေေးသလို သိုသိုသိပျသိပျနတေတျတဲ့သူတှဖွေဈပါတယျ။ အနအေထိုငျအရမျးတတျသလို၊ စိတျနှလုံးလညျး အေးခမျြးတဲ့သူတှပေါ။ လှယျလှယျနဲ့ဒေါသမထှကျတတျသလို တကယျဒေါသထှကျလာပွီဆိုရငျလညျး တဈဖကျက တျောတျောလှနျလို့ဆိုတာ သခြောပါတယျ။
(၆) နိုဝငျဘာဖှားလေးတှဟော ကိုယျပိုငျစညျးမဉျြးစညျးကမျးနဲ့ နထေိုငျတတျသူတှဖွေဈပါတယျ။ သူတဈပါးကို ပွိုငျဆိုငျတာတှေ၊ မနာလိုတာတှမေရှိသလို၊ သူမြားလုပျတိုငျးလညျး လိုကျမလုပျတတျပါဘူး။ မလုပျခငျြတာကို အတငျးခိုငျးလို့မရသလို၊ လုပျခငျြပွီဆိုရငျလညျး တားလို့မရတဲ့သူတှဖွေဈပါတယျ။
(၇) နိုဝငျဘာဖှားလေးတှဟော တဈယောကျတညျးနတေတျတဲ့သူတှဖွေဈပါတယျ။ သူတို့ရဲ့ အတှေးတှေ၊ သူတို့စိတျထဲမှာရှိတာတှကေိုလညျး ပွောတတျတဲ့သူတှမေဟုတျပါဘူး။ တဈယောကျတညျး သီးသီးသနျ့သနျ့နဲ့ လြှို့ဝှကျတတျတဲ့သူလေးတှဖွေဈပါတယျ။
(၈) သူတဈပါးကို အရမျးစာနာတတျသလို သတ်တဝါလေးတှကေိုတောငျ ကွငျနာပွီးမတ်ေတာထားနိုငျတဲ့သူတှေ ဖွဈပါတယျ။ ကိုယျကစပွီး သူတဈပါးကို နာကငျြအောငျ ဘယျတော့မှစလုပျမယျ့သူတှေ မဟုတျပါဘူး။
(၉) နိုဝငျဘာဖှားလေးတှဟော အရမျးတရားမြှတတဲ့သူတှဖွေဈပါတယျ။ သူတဈပါးကို အနိုငျကငျြ့တာတှေ၊ မကျြနှာလိုကျတာတှေ မရှိသလို သူငယျခငျြးတှကေိုပဲဖွဈဖွဈ၊ လကျအောကျငယျသားတှကေိုပဲဖွဈဖွဈ တနျးတူအခှငျ့အရေးပေးပွီး မြှမြှတတ ခဈြခငျတတျတဲ့သူတှဖွေဈပါတယျ။
(၁၀) နိုငျဝငျဘာဖှားလေးတှဟော နညျးနညျးတော့ ဇီဇာကွောငျပါတယျ။ သူတို့ဒါဆိုဒါ၊ ဘူးဆို ဖရုံမသီးတဲ့သူလေးတှဖွေဈပါတယျ။ သူတဈပါးရဲ့ထငျမွငျ ယူဆခကျြတှကေို အမွဲလေးစားတတျတဲ့သူတှေ ဖွဈတဲ့အလြောကျ သူတို့အပျေါမှာလညျး လေးစားသမှုရှိတာကို လိုခငျြပါတယျ။ Credit;THAR THAR LAY
“ဇနီးဖွဈသူကို ဖု နျး အ သ ဈ ဝ ယျ ပေး ပွီး တဲ့ နောကျ အှ နျ လို ငျး ပျေါ ကလူ နဲ့ ပါ သှား တာ ကွောငျ့ သား လေး တ ဈ ယော ကျ နဲ့ ကြ နျ ခဲ့ တဲ့ အ မြိုး သား”
ဇနီးဖြစ်သူကို ဖုန်းဝယ်ပေးပြီးတဲ့နောက် အွန်လိုင်းကလူနဲ့ပါသွားတာကြောင့် သားလေးတစ်ယောက်နဲ့ကျန်ခဲ့တဲ့အမျိုးသား
သုံးဘီးမောင်းသမားတစ်ယောက်ဟာ သူ့မိန်းမကFacebookပေါ်ကလူနဲ့တွေ့ပြီးနောက် သူနဲ့ကလေးကိုထားသွားခဲ့တာကြောင့် ကလေးပါ အလုပ်ကိုခေါ်ပြီး သုံးဘီးမောင်းနေရကြောင်းကို Viral4real ကနေသတင်းရရှိပါတယ်။
ဖိလစ်ပိုင်မှာ သုံးဘီးမောင်းသမားတစ်ယောက်အနေနဲ့ အလုပ်လုပ်နေရတာတကယ်ကိုခက်ခဲပါတယ်။နေပူထဲမှာ နာရီပေါင်းများစွာအလုပ်လုပ်ရပြီး နိုင်ငံရဲ့ယာဉ်အသွားအလာပြဿနာတွေကိုလည်း ချိန်ညှိရပါတယ်။ မိန်းမက ထားသွားပြီးနောက်ပိုင်း ကလေးကို အလုပ်ခေါ်လာပြီး စောင့်ရှောက်ရတာ
ထိုသူ့အနေနဲ့၂ဆပင်ပန်းပါတယ်။ အဆိုပါသုံးဘီးမောင်းသမားနာမည်က Rudy လို့အမည်ရပြီး Facebookအသုံးပြုသူ Jane Eguillos က အလုပ်ကြိုးစားလွန်းတဲ့ဖခင်ဖြစ်သူ Rudyကိုသတိပြုမိပြီး လူမှုကွန်ယက်ပေါ်ကနေ သူ့ဇာတ်လမ်းကို ဓာတ်ပုံတွေနှင့်တကွ ဝေမျှဖို့အတွက် ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။
Rudy ကသူတို့အိမ်ထောင်သက်က၃နှစ်ရှိပြီဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။နောက်တော့သူ့မိန်းမကိုဖုန်းဝယ်ပေးပြီးနောက်ပိုင်းမှာသူမကFacebook စတင်အသုံးပြုပြီး လိုင်းပေါ်မှာ ယောင်္ကျားတစ်ယောက်နဲ့ဆုံပြီး နောက်ဆုံးမှာ ထိုယောင်္ကျားနဲ့ တွေ့ဖို့သွားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အင်တာနက်အသုံးပြုသူတွေက အဖေနဲ့သားဖြစ်သူရဲ့သနားစရာဇာတ်လမ်းကိုကြားရတဲ့အခါ စုတ်တသတ်သတ်ဖြစ်နေကြပါတယ်။ နောက်ဆုံးမှာတော့တီဗီအစီအစဉ်ပရိုဂရမ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ “Kapusp Mo, Jessica Soho” ကိုရောက်သွားပါတယ်။ အစီအစဉ်တင်ဆက်သူ ပြောပြချက်အရ Rudyက သုံးဘီးယာဉ်လေးကိုတကယ်တော့ သူမပိုင်ပါဘူး။
နေ့တိုင်း ပီဆို၁၅၀ပေးသွင်းရပါတယ်။ နောက်ပြီးတော့ အုံနာအိမ်ကိုသွားတဲ့အခါမှာလည်း နေ့တိုင်း ၂ကီလိုမီတာ (၁မိုင်ကျော်ကျော်)လောက် လမ်းလျှောက်ရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ပြီးနောက်မှာတော့ Rudyကိုစားသောက်ကုန်၊နို့နဲ့ကလေးအတွက် ကလေးdiapers တွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့တဲ့အပြင်ကို သုံးဘီးအသစ်လေးတစ်စီးပါ လက်ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။crd
ဇနီးဖွဈသူကို ဖုနျးဝယျပေးပွီးတဲ့နောကျ အှနျလိုငျးကလူနဲ့ပါသှားတာကွောငျ့ သားလေးတဈယောကျနဲ့ကနျြခဲ့တဲ့အမြိုးသား
သုံးဘီးမောငျးသမားတဈယောကျဟာ သူ့မိနျးမကFacebookပျေါကလူနဲ့တှပွေီ့းနောကျ သူနဲ့ကလေးကိုထားသှားခဲ့တာကွောငျ့ ကလေးပါ အလုပျကိုချေါပွီး သုံးဘီးမောငျးနရေကွောငျးကို Viral4real ကနသေတငျးရရှိပါတယျ။ ဖိလဈပိုငျမှာ သုံးဘီးမောငျးသမားတဈယောကျအနနေဲ့ အလုပျလုပျနရေတာတကယျကိုခကျခဲပါတယျ။
နပေူထဲမှာ နာရီပေါငျးမြားစှာအလုပျလုပျရပွီး နိုငျငံရဲ့ယာဉျအသှားအလာပွဿနာတှကေိုလညျး ခြိနျညှိရပါတယျ။ မိနျးမက ထားသှားပွီးနောကျပိုငျး ကလေးကို အလုပျချေါလာပွီး စောငျ့ရှောကျရတာ ထိုသူ့အနနေဲ့၂ဆပငျပနျးပါတယျ။ အဆိုပါသုံးဘီးမောငျးသမားနာမညျက Rudy
လို့အမညျရပွီး Facebookအသုံးပွုသူ Jane Eguillos က အလုပျကွိုးစားလှနျးတဲ့ဖခငျဖွဈသူ Rudyကိုသတိပွုမိပွီး လူမှုကှနျယကျပျေါကနေ သူ့ဇာတျလမျးကို ဓာတျပုံတှနှေငျ့တကှ ဝမြှေဖို့အတှကျ ဆုံးဖွတျလိုကျပါတယျ။ Rudy ကသူတို့အိမျထောငျသကျက၃နှဈရှိပွီဖွဈတယျလို့ဆိုပါတယျ။
နောကျတော့သူ့မိနျးမကိုဖုနျးဝယျပေးပွီးနောကျပိုငျးမှာသူမကFacebook စတငျအသုံးပွုပွီး လိုငျးပျေါမှာ ယောင်ျကြားတဈယောကျနဲ့ဆုံပွီး နောကျဆုံးမှာ ထိုယောင်ျကြားနဲ့ တှဖေို့သှားတယျလို့ ဆိုပါတယျ။ အငျတာနကျအသုံးပွုသူတှကေ အဖနေဲ့သားဖွဈသူရဲ့သနားစရာဇာတျလမျးကိုကွားရတဲ့အခါ
စုတျတသတျသတျဖွဈနကွေပါတယျ။ နောကျဆုံးမှာတော့တီဗီအစီအစဉျပရိုဂရမျတဈခုဖွဈတဲ့ “Kapusp Mo, Jessica Soho” ကိုရောကျသှားပါတယျ။ အစီအစဉျတငျဆကျသူ ပွောပွခကျြအရ Rudyက သုံးဘီးယာဉျလေးကိုတကယျတော့ သူမပိုငျပါဘူး။ နတေို့ငျး ပီဆို၁၅၀ပေးသှငျးရပါတယျ။
နောကျပွီးတော့ အုံနာအိမျကိုသှားတဲ့အခါမှာလညျး နတေို့ငျး ၂ကီလိုမီတာ (၁မိုငျကြျောကြျော)လောကျ လမျးလြှောကျရတယျလို့ ဆိုပါတယျ။ ပွီးနောကျမှာတော့ Rudyကိုစားသောကျကုနျ၊နို့နဲ့ကလေးအတှကျ ကလေးdiapers တှထေောကျပံ့ပေးခဲ့တဲ့အပွငျကို သုံးဘီးအသဈလေးတဈစီးပါ လကျဆောငျပေးခဲ့တယျလို့ သိရပါတယျ။crd
“မသနျစှမျးဘဝနဲ့ ဟငျးသီးဟငျးရှကျလေးတှေ ရောငျးတာတောငျ ပိုကျဆံတှအေကွိမျကွိမျအခိုးခံနရေတဲ့ ဦလေးကွီး”
မသန်စွမ်းဘဝနဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်လေးတွေ ရောင်းတာတောင် ပိုက်ဆံတွေအကြိမ်ကြိမ်အခိုးခံနေရတဲ့ ဦလေးကြီး
အချို့မသန်စွမ်းသူတွေက သူတို့ရဲ့အခြေအနေကြောင့် အိမ်ထဲမှာသာနေပြီး ဘာမှမလုပ်ဘဲ နေ့တာကို လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ကုန်ဆုံးသွားနိုင်တဲ့ လူတွေရှိနေတာ အရမ်းအံ့သြဖို့ ကောင်းပါတယ် ။
ဒါပေမယ့် ယခုဖော်ပြမဲ့ မသန်စွမ်းလူက အပြင်းအထန်ကြိုးစားပြီး သူတို့မိသားစုတွေကို ငွေရှာဖို. အတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားတာပါ ။
ဟင်းသီးဟင်းရွက်ရောင်းချသူဖြစ်လာတဲ့ မသန်စွမ်းသူ Kuya George Belarmino က သူ့ရဲ့ သုံးဘီးဆိုင်ကယ်ကို သုံးပြီး ကုန်ပစ္စည်းများရောင်းရန် များစွာသောကျေးရွာများသို့ သွားရောင်းလေ့ရှိပါတယ် ။
သူ့အနေနဲ့ သွားလာရန်ခက်ခဲသော်လည်း Kuya George Belarmino က သူရဲ့ အခြေအနေကို နှိမ့်ချမထားခဲ့ပါဘူး ။
ဝမ်းနည်းစရာမှာ သူက သူရဲ့ ခက်ခက်ခဲခဲနဲ့ရတဲ့ ငွေတွေ ခိုးခံရပါတယ် ။ သူဟင်းသီးဟင်စရွက်တွေလိုက်ရောင်းနေတုန်း လူသုံးဦးက သူ့ပိုက်ဆံကို ခိုးပြီး နာကြင်အောင် လုပ်ခဲ့သေးပါတယ် ။
ထိုအခါမှာ သူဆေးရုံကို ရက်အတော်ကြာ နေခဲ့ရပါတယ် ။ သူ့ရဲ့အခက်အခဲကို ကြားရတဲ့အခါ များစွာသောအင်တာနက်သုံးစွဲသူများက သူ့ရဲ့ ဆေးဖိုးဝါးခအတွက် ကူညီပေးခဲ့ကြပါတယ် ။
ကျေးဇူးတင်စရာက Kuya George ဟာ စိန်ခေါ်မှုများကို ကျော်လွှားနိုင်ခဲ့ပြီး မကြာမီမှာ သူ့စီးပွားရေး ပြန်လည်ကြီးထွားလာခဲ့ပါတယ် ။
သူ့ရဲ့ ခံနိုင်ရည်စွမ်းက netizens များစွာရဲ့ လေးစားမှုကိုရရှိခဲ့ပြီး သူ့ကိုဆက်လက်ကူညီရန် အချို့ကအားပေးခဲ့ပါတယာ ။
အခြားသူများက သူ့ကိုအတုယူစရာလိုာသတ်မှတ်ပြီး သူ့အခြေအနေနဲ့ သူတွေ့ကြုံခဲ့သတဲ့ အခက်အခဲကြားမှ သူ့ရဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေ ဘယ်တော့မှမဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့အတွက် ချီးကျူးကြောင်း ဖော်ပြခဲ့ပါတယ် ။Crd
မသနျစှမျးဘဝနဲ့ ဟငျးသီးဟငျးရှကျလေးတှေ ရောငျးတာတောငျ ပိုကျဆံတှအေကွိမျကွိမျအခိုးခံနရေတဲ့ ဦလေးကွီး
အခြို့မသနျစှမျးသူတှကေ သူတို့ရဲ့အခွအေနကွေောငျ့ အိမျထဲမှာသာနပွေီး ဘာမှမလုပျဘဲ နတေ့ာကို လှယျလှယျကူကူနဲ့ကုနျဆုံးသှားနိုငျတဲ့ လူတှရှေိနတော အရမျးအံ့သွဖို့ ကောငျးပါတယျ ။
ဒါပမေယျ့ ယခုဖျောပွမဲ့ မသနျစှမျးလူက အပွငျးအထနျကွိုးစားပွီး သူတို့မိသားစုတှကေို ငှရှောဖို. အတတျနိုငျဆုံးကွိုးစားတာပါ ။
ဟငျးသီးဟငျးရှကျရောငျးခသြူဖွဈလာတဲ့ မသနျစှမျးသူ Kuya George Belarmino က သူ့ရဲ့ သုံးဘီးဆိုငျကယျကို သုံးပွီး ကုနျပစ်စညျးမြားရောငျးရနျ မြားစှာသောကြေးရှာမြားသို့ သှားရောငျးလရှေိ့ပါတယျ ။
သူ့အနနေဲ့ သှားလာရနျခကျခဲသျောလညျး Kuya George Belarmino က သူရဲ့ အခွအေနကေို နှိမျ့ခမြထားခဲ့ပါဘူး ။
ဝမျးနညျးစရာမှာ သူက သူရဲ့ ခကျခကျခဲခဲနဲ့ရတဲ့ ငှတှေေ ခိုးခံရပါတယျ ။ သူဟငျးသီးဟငျစရှကျတှလေိုကျရောငျးနတေုနျး လူသုံးဦးက သူ့ပိုကျဆံကို ခိုးပွီး နာကွငျအောငျ လုပျခဲ့သေးပါတယျ ။
ထိုအခါမှာ သူဆေးရုံကို ရကျအတျောကွာ နခေဲ့ရပါတယျ ။ သူ့ရဲ့အခကျအခဲကို ကွားရတဲ့အခါ မြားစှာသောအငျတာနကျသုံးစှဲသူမြားက သူ့ရဲ့ ဆေးဖိုးဝါးခအတှကျ ကူညီပေးခဲ့ကွပါတယျ ။
ကြေးဇူးတငျစရာက Kuya George ဟာ စိနျချေါမှုမြားကို ကြျောလှားနိုငျခဲ့ပွီး မကွာမီမှာ သူ့စီးပှားရေး ပွနျလညျကွီးထှားလာခဲ့ပါတယျ ။
သူ့ရဲ့ ခံနိုငျရညျစှမျးက netizens မြားစှာရဲ့ လေးစားမှုကိုရရှိခဲ့ပွီး သူ့ကိုဆကျလကျကူညီရနျ အခြို့ကအားပေးခဲ့ပါတယာ ။
အခွားသူမြားက သူ့ကိုအတုယူစရာလိုာသတျမှတျပွီး သူ့အခွအေနနေဲ့ သူတှကွေုံ့ခဲ့သတဲ့ အခကျအခဲကွားမှ သူ့ရဲ့မြှျောလငျ့ခကျြတှေ ဘယျတော့မှမဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့အတှကျ ခြီးကြူးကွောငျး ဖျောပွခဲ့ပါတယျ ။Crd
“ခွတေု လကျတု လိုအပျနသေူတှကေို လှူဒါနျးခငျြတာကွောငျ့ စကျရုံလေးတညျဆောကျဖို့ အကောငျအထညျဖျောနတေဲ့ ခိုငျနှငျးဝေ”
ခြေတု လက်တုလေးတွေ လှူဒါန်းချင်တာကြောင့် စက်ရုံလေးတည်ဆောက်ဖို့ အကောင်အထည်ဖော်နေတဲ့ ခိုင်နှင်းဝေ
ပေါ်ပင်စုံ ပရိသတ်ကြီးရေ ပရဟိတမင်းသမီးလေးဖြစ်တဲ့ ခိုင်နှင်းဝေကတော့ အလှူအတန်းတွေကို နေ့စဉ်လိုလို ပြုနေတဲ့အပြင် အခုလဲနောက်ထပ် အလှူလေးပြုဖို့စီစဉ်နေပြန်ပါပီ
မိဘမဲ့ ခလေးလေးတွေကိုလဲ ခေါ်ယူစောင့်ရှောက်ထားပြီး သားသမီးအရင်းသဖွယ် ကျွေးမွေး စောင့်ရှောက်နေတဲ့ မိခင်ကြီးတစ်ဦးလဲ ဖြစ်ပါတယ်
နောကျထပျ ပွုမဲ့ အလှူနဲ့ပတျသကျတဲ့ အကွောငျးလေးကို ခိုငျနှငျးဝမှေ အခုလိုလေးရးသားထားပါတယျနျော
” ခြေတု လက်တု စက်ရုံလေး တစ်ခု တည်ထောင်ဘို့ စ,တင် အကောင်အထည် ဖော်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်..
ကျမကို လှူဒါန်းထားတဲ့ တောင်ဒဂုံ (၁၀၅) မြေကွက်မှာ စက်ရုံ အသေးစားလေး တည်ထောင်ပြီး ခြေတု ၊ လက်တု မတပ်နိုင်သော မည်သူမဆို အခမဲ့ တပ်ဆင်လှူဒါန်းပေးသွားပါမယ်..
စက်ရုံအတွက် နေရာ ဆောက်ခြင်း၊ စက်များ ဝယ်ယူခြင်း၊ ပညာရှင်များ ခေါ်ယူခြင်းတို့ကို အမြန်ဆုံး လုပ်ဆောင်၍ လိုအပ်နေသော သူများကို ကူညီပေးသွားပါမယ်..
ကျမ နဲ့ အတူ ခုနှစ်ရက် သားသမီးများ အားလုံးရဲ့ စုပေါင်း ကုသိုလ် အလှူလေးများပဲ ဖြစ်ပါတယ်ရှင်..”
ဝင်ရောက်ဖတ်ရှုခဲ့တဲ့ ပရိသတ်ကြီးနဲ့တကွ မြန်မာပြည်သူပြည်သားအားလုံး ကပ်ဘေးအပေါင်းမှ ကင်းလွှတ်ပြီး သာယာအေးချမ်းတဲ့ ဘဝလေးကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ ဗျာ
ခွတေု လကျတုလေးတှေ လှူဒါနျးခငျြတာကွောငျ့ စကျရုံလေးတညျဆောကျဖို့ အကောငျအထညျဖျောနတေဲ့ ခိုငျနှငျးဝေ
ပျေါပငျစုံ ပရိသတျကွီးရေ ပရဟိတမငျးသမီးလေးဖွဈတဲ့ ခိုငျနှငျးဝကေတော့ အလှူအတနျးတှကေို နစေ့ဥျလိုလို ပွုနတေဲ့အပွငျ အခုလဲနောကျထပျ အလှူလေးပွုဖို့စီစဥျနပွေနျပါပီ
မိဘမဲ့ ခလေးလေးတှကေိုလဲ ချေါယူစောငျ့ရှောကျထားပွီး သားသမီးအရငျးသဖှယျ ကြှေးမှေး စောငျ့ရှောကျနတေဲ့ မိခငျကွီးတဈဦးလဲ ဖွဈပါတယျ
နောကထြပြ ပှုမဲ့ အလှူနဲ့ပတသြကတြဲ့ အကှောငြးလေးကို ခိုငနြှငြးဝမှေ အခုလိုလေးရးသားထားပါတယနြော
” ခွတေု လကျတု စကျရုံလေး တဈခု တညျထောငျဘို့ စ,တငျ အကောငျအထညျ ဖျောဖွဈပါတယျရှငျ..
ကမြကို လှူဒါနျးထားတဲ့ တောငျဒဂုံ (၁၀၅) မွကှေကျမှာ စကျရုံ အသေးစားလေး တညျထောငျပွီး ခွတေု ၊ လကျတု မတပျနိုငျသော မညျသူမဆို အခမဲ့ တပျဆငျလှူဒါနျးပေးသှားပါမယျ..
စကျရုံအတှကျ နရော ဆောကျခွငျး၊ စကျမြား ဝယျယူခွငျး၊ ပညာရှငျမြား ချေါယူခွငျးတို့ကို အမွနျဆုံး လုပျဆောငျ၍ လိုအပျနသေော သူမြားကို ကူညီပေးသှားပါမယျ..
ကမြ နဲ့ အတူ ခုနှဈရကျ သားသမီးမြား အားလုံးရဲ့ စုပေါငျး ကုသိုလျ အလှူလေးမြားပဲ ဖွဈပါတယျရှငျ..”